အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီဘလော့လေးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တာတော်တော်ကိုကြာနေပါပြီး
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲရင်တွင်းခံစားချက်များကိုပေးပို့ နိုင်ပါတယ်
ပေးပို့ ရန်လိပ်စာ khinmgtun84@gmail.com သို့ ပေးပို့ နိုင်ပါသည် ရေးသူကလောင်ရှင်နာမည်နှင့်
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ အချိန် 8:53 PM No comments:
HIV ပိုးရှိသူများကို WHO လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဆေးပေးနိုင်ရန် ၃ နှစ်စောင့်ရဦးမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးလိုအပ်လျက်ရှိသည့် HIV ပိုးရှိသူ ၁၂၀၀၀၀ ကျော် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ယခုနှစ်တွင် အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင် နိုင်ရန် ၃ နှစ်ခန့် အချိန်ယူရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ HIV ပိုးရှိသူများနှင့် နေထိုင်သူများ အသင်း (Myanmar Positive Group – MPG) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးသန့်အောင်က ပြောသည်။
HIV ကူးစက်ခံထားရပြီး CD4 ကောင်ရေ ၅၀၀ အောက်သို့ ကျဆင်းနေသူတိုင်းကို ART (Antiretroviral Therapy) ကုထုံးဖြင့် ဆေးဝါးကုသမှုပေးရန် WHO က ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မူလ ၂၀၁၀ ထုတ်ပြန်ချက် အရဆိုလျှင် CD4 ကောင်ရေ ၃၅၀ အောက်ရှိမှ ART ကုထုံးအတိုင်း ARV (Antiretroviral drugs) ဆေးများ ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
“အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာက WHO ရဲ့ ၂၀၁၀ လမ်းညွှန်ချက်ကိုပဲ အမျိုးသားအဆင့် လမ်းညွှန်ချက် ဆွဲပြီးလုပ်နေတုန်း ရှိသေး တယ်။ လက်ရှိ CD4 ၃၅၀ အောက်နဲ့ ART ပေးနေတာတောင် ဆေးဝါးလိုအပ်သူက တသိန်းနှစ်သောင်း သုံးထောင်ကျော် ရှိတယ်။ အခု လမ်းညွှန်ချက် အသစ်အတိုင်းဆိုရင် ဆေးလိုတဲ့သူတွေ ပိုတိုးလာမယ်။ အဲဒါကို ၂၀၁၅ – ၁၆ လောက်မှ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မယ်” ဟု MPG ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးသန့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ARV ဆေးဝါး လိုအပ်နေသေးသည့် HIV ပိုးရှိသူ တသိန်းနှစ်သောင်း ကျော်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Global Fund) ၏ စံအရ ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ရောဂါပိုးရှိသူများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆေးဝါး တိုးမြှင့် ပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ သိရသည်။
HIV/ AIDS ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အခြေအနေနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနေသည့် နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရန်ပုံငွေများ တိုးမြှင့် ချထားပေးခဲ့သည့်အတွက် ယခုနှစ်တွင် အထူး ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၆ သန်း ရရှိထားကြောင်း ဦးမျိုးသန့်အောင်က ပြောသည်။
WHO က ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်အသစ် အတိုင်း CD4 ၅၀၀ အောက် ရှိသူတိုင်း ART ကုထုံး ခံယူနိုင်မည် ဆိုလျှင် HIV မှ AIDS အဆင့်အထိ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ကျနိုင်ခြင်း၊ HIV ပိုးကြောင့် ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းလာရာမှ တခြား အခွင့်အရေးယူ ရောဂါများ ကူးစက်ခံရမှု မရှိနိုင်တော့သဖြင့် ဆေးကုသစရိတ်များ လျော့ကျခြင်း၊ စောလျှင်စွာ ဆေးကုသမှု ရရှိသဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်လာပြီး တခြားသူများအား ကူးစက်မှုနှုန်း လျော့ကျစေခြင်း စသည့် အားသာချက်များ ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
WHO ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို လာမည့် ၃ နှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် HIV ပိုး စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံအနှံ့ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ရန် အစိုးရက စီစဉ်ပေးသင့်ကြောင်း၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ရန် HIV/ AIDS ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ဦးမျိုးသန့်အောင်က အကြံပြု ပြောကြားသည်။
UNAIDS မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တွက်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းဇယားများ အရဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV ပိုးရှိသူ ၂၂၀၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ အချိန် 11:52 AM No comments:
သိပ် ရက်စက်တဲ့ .......... မိန်းကလေးကို ပြန်လဲ တမ်းတခြင်း.......
မိန်းကလေးရယ် ...နင့်ဟာ ဆိုင်သူရှိနေတဲ့.. ..သူပဲ ....ငါ့ဟာငါ့နေနေတာကို... ဘာလို့ ..... ကစားရတာလဲကွာ .... ငါ့မှာခုတော့ အရူးတပိုင်နဲ့မီးဝိုင် သလို ခံစားနေရပြီး........ ခုခေတ်မှာ.....
အချစ်ကို ...အပျော်သဘောကစားကြတဲ့သူတွေရှိသလို ...... တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ ချစ်ကြတဲ့.....
သူတွေလဲ ရှိပါတယ်ဟာ......... ခုဆို ငါ့မှာ ... ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပြောတွေလဲ ခံနေရပြီး........
“ စေ့စပ် ထားတဲ့ မိန်းကလေး ကိုမှ ပတ်သက်လို့”တဲ့ ........ အော်....... လူတွေရယ်... ခက်ပါရဲ့ .........
စပြီး ပတ်သက်ခဲ့တာနင်............. စပြီး ph တွေဆက်ခဲ့တာနင် .......... အခွင့်ရေးတွေပေးပြီး ..........
ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ချည်နှောင်းခဲ့တာနင် ............ ဒါတွေကို သူ့တို့မှ မသိကြတာ ...............
မာယာတွေအထပ်ထပ် ခင်း ......... အပြုံတုတွေနဲ့ ဖမ်းစား ........... စကားလုံးလှလှတွေနဲ့အချိုသတ်........
မျက်ဝန်းနက်တွေနဲ့ညို့ယူပြီး .......... ရမ္မက်ပြင်းပြင်း အနမ်းတွေနဲ့ ......အတွေ့အထိတွေနဲ့ .............
ငါ့ရဲ့ ......... အသဲကို ကစားချင်သလို ကစား ပြီးမှ ................. ဒါတွေကို “အိပ်မက် တစ်ခုလိုပဲ .........
သဘောထားပြီး ........ ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကို မေ့လိုက်ရအောင်”တဲ့.......... ရမလား ......????...... ......
မိန်းကလေးရယ် ........ လာချင်သလိုလာ.....ပြီး .... ပြန်ချင်သလို ပြန်ရအောင်..... ငါ့ကိုနင့်ရဲ့ ...........
ခံစားချက်တွေ ဖြေဖျောက်ရာ .... တည်ခိုခန်းများမှတ်နေလား ............. မိန်းကလေးရယ် ............
ခုတော့ ငါ့မှာ.......... ဆုတ်လဲစူး စားလဲရူး ရမဲ့ .... အဖြစ်ပါလား .......... ရှေ့တိုးရင်လဲ လူကြမ်း .........
နောက်ဆုတ်ရင်လဲ ...... နှလုံးသား ကွဲကြေ ရမဲ့ အဖြစ်ပါ ............ .................... .............
နင့် သိပ်ရက်စက်တာပဲ ............... နင့်ကို ငါ့ သိပ်ချစ်သွားတာပါ မိန်းကလေးရယ် .................
ငါ့ခုချိန်ထိ ....နင့်ကို .......... တမ်းတနေတုန်းပါ ......... ............. ............
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ အချိန် 11:42 AM No comments:
ning site အလှဆင်cssကုတ်များ
Css ကုဒ်ဒီမှာယူပါ . . .
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ အချိန် 10:39 AM 1 comment:
တိုင်းတပါးရောက်အတွေးစ ငါ့ဘဝအတွက်ငါ ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ပထမအချက်အနေနဲ့ ဘာကိုအရေးကြီးပြီလဲ ဦးစားပေးသင့်သလဲ? အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့ငါ့အတွက် ဒီအချိန်လက်မထောင်နိုင်အောင် ဘာကိုလုပ်သင့်သလဲ? ဒီကိုလာတာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့လာရတာလဲ?
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ အချိန် 11:30 AM No comments:
စာရေးသူကို ဝေဖန်အကြံပြုချက်လေးတွေ ရေးပေးချင်ရင်..
HTML COLOR CODE များယူရန်
သာသနာထွန်းကားရာဆိုဒ်များသီတဂူဓမ္မဝိဟာရမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမိုးကုတ်ဝိပဿနာမင်းကွန်းဆရာတော်သဲအင်းဂူဆရာတော်သီတဂူဆရာတော်မဟာစည်-၁အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်ရိပ်သာချမ်းမြေ့ဆရာတော်အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ဖြူးဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဓ-ဓမ္မဒူတအရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတအရှင်ဆန္ဒာဓိကမဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လအရှင်ဇဝန-၁အရှင်ဇဝန-၂ဆရာတော်ဦးဝိဇယဓမ္မဒေါင်းလုပ်ဓမ္မရံသီဓမ္မဒါနဓမ္မပေါင်းချုပ်E-DhammaBurmese Classic တရားများနိဗ္ဗာန်နတရားတော်များ-၁တရားတော်များ-၂ဓမ္မအေးရိပ်သီရိမင်္ဂလာဘ၀နေ့သစ်များသီတဂူဦးဇင်းလေးဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၁ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၂ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတုဓမ္မသုခဓမ္မရနံ့သန့်-တည်-ပွား ဆရာဦးမြင့်လွင်အဖြူရောင်မေတ္တာ-၁အဖြူရောင်မေတ္တာ-၂ဓမ္မမေတ္တာဝိမုတ္တိသုခဝိမုတ္တိရသမေတ္တာပေတောဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ကိုထွန်းထွန်းလှိုင်အောင်မြေသီတဂူဓမ္မဝိဟာရဓမ္မရေစင်ဓမ္မရသကောက်တေး-သိင်္ခပါရမီအလင်းစေတမာန်ရွက်ဝါအေးငြိမ်းပျော်ရွင်သစ္စာအလင်းအလင်းများရှိရာသို့A light of Dhammaအလင်းရောင်ဘားမားမောင်အလှတရားကိုမင်းဝေသုခရိပ်ရွှေကြာတရားတော်ဝိုင်အမ်ဘီအေအလှူဒါနဓမ္မရိပ်သစ္စာတရားမြတ်ဗုဒ္ဓထေရဝါဒသာသနာမနက်ဖြန်ဥပသကာအရှင်ကုမာရဓမ္မပဒဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများဓမ္မဟေဝန်ရည်ရွယ်ရာအပြစ်ကင်းသောနေရာအနတ္တလက္ခဏဦးကောဝိဒဆရာလေးဒီပင်္ကရာလောကချမ်းသာဓမ္မဆုံချက်တောင်ပေါ်သားအရှင်ကုသလသာမစကြာဝဠာဘာဝနာဗလဖိုရမ်ဒဿနခရီးစဉ်ကိုငယ်
ဂျာနယ်များဖတ်ရူလေ့လာရန်အင်တာနက်ဂျာနယ်7daynews ဂျာနယ်weeklyeleven ဂျာနယ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်MyanmarTimeဂျာနယ်အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်ဧရာဝတီဂျာနယ်ရွှေအမြူတေဂျာနယ်မြန်မာဘောလုံးEleven ဂျာနယ်Flower News ဂျာနယ်
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒ်များသို့မြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရသမြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားများဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီးဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မရနံဓမ္မရိပ်ဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ဓမ္မဌာနေဓမ္မဟေဝန်ဓမ္မစကားဓမ္မမေတ္တာဓမ္မကုန်းမြေဓမ္မဥယျာဉ်ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မဟာလယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာဓမ္မဒူတ လူငယ်များအသင်းဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)အရှင်ကုမာရအရှင်ဝိစိတ္တ (Korea)မြတ်ရောင်နီအရှင်လောကနာထအရှင်နန္ဒသာရ(သစ္စာရောင်ခြည်)အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်)အရှင်ကောဝိဒ၏ပညာဒါနအရှင်ဦးဥတ္တမသာရအရှင်ကုသလသာမိ (ပျော်ဘွယ်)အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ)အရှင်သာဓိန(အလင်းသစ်)အရှင်ခေမိန္ဒ (မော်ကွန်းသစ်)အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ )အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ)ရဝေနွယ်(အင်းမ)သာမဏေကျော်စာသင်တိုက်တရားတော်သုခကာမီဥပသကာဝိမုတ္တိရသစန္ဒာသူရိယမြတ်ပန်းရဂုံ (ဓမ္မသာကစ္ဆာသဘင်)သစ္စာတရားများစုဝေးရာယောအသင်းစစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းဝါတွင်းအင်္ဂါပတ် ဆွမ်းလောင်းမြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်းထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းပညာရံသီဝိဟာရစိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်းဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီဗုဒ္ဓဓမ္မရံသီ(ဖန်လန်)ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်းဓမ္မရောင်ခြည်ကျောင်းညောင်ကန်အေး(ဂျိုဟိုး)သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းသီတဂူသတင်းသီတဂူစတားမိုးကုတ် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ပတ္တမြားရိပ်သာ (မိုးကုတ်)မဟာစည် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ညောင်ကန်အေး(မဟာစည်)ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(မဟာစည်)အေးရိပ်ချောင်(မဟာစည်)သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာကန္နီသမထဝိပဿနာမြေဇင်း ဝိပဿနာကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကလေးဝ တောရလောကချမ်းသာအနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာအဖြူရောင်မေတ္တာသစ္စာအလင်းသုခရိပ်ချယ်ရီမြို့တော်နေခြည်သွေးသစ်သရုပ်ပြ အဘိဓာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရွှေတိဂုံပါရမီဖြည့်မပြီးဆုံးသောနေ့ရက်များတရား၌မွေ့လျော်ခြင်းပျော်ဘွယ်ဆရာတော်ငြိမ်းချမ်းစွာရွက်ဝါမနက်ဖြန်ရည်ရွယ်ရာမင်္ဂလာသတင်းစဉ်အေးငြိမ်းပျော်ရွှင်စေတနာသုခဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံကြီးဇမ္ဗူသီရိမြတ်ရတနာဓမ္မဒါနဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မရသနိဗ္ဗာနနိဗ္ဗာနဓမ္မမိုးကုတ်(လန်ဒန်)မြန်မာ့ရတနာအရှင်လောကနာထအောင်မြေပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်အနတ္တလက္ခဏသုတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာBuddhaNetDhamma DownloadDhamma WebDhammaWebBooksDhammaDownloadDhamma EnglishBuddha NetE-DhammaGolden WordsOne Dollar FundThe Best Friendပညာပါရမီ
စာကြည့်တိုက်များမြန်မာအီးဘွခ်မြန်မာရခိုင်များရွှေစကားနေ့သစ်စာအုပ်စင်အဖြူရောင်မေတ္တာအံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင်အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင်ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင်ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင်ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ်စာပေရိပ်စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက်ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင်Myanmar Ebook ArchiveMyanmar EbookGolden MyanmarDhamma Web BooksDhamma Download MyanmarDhamma Download EnglishBurmese ClassicBuddha NetBook Hive
ရင်ထဲမှလာသောကလောင်ရှင်များဇေယျာလင်းအမရာဆရာအောင်သင်းအိမ့်ချမ်းမြေ့ဆရာမကြည်အေးလွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်)မိုဃ်းဝေးခရမ်းပြာထက်လူသစ္စာနီညလင်းဖြူဆရာအတ္တကျော်ဆုကဗျာမွန်းသက်ပန်(ဆေး-၁)သူရဿဝါပန်ဒိုရာမယ်ကိုးနိုင်းနိုင်းစနေချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)မြသွေးနီ
နည်းပညာဆိုဒ်များသို့စေတန်ဂေါ့သံလုံငယ်ညီလင်းဆက်ညီနေမင်းစံပီးမောင်ပညာမောင်စေတနာကိုThinkerကိုရန်အောင်ကိုမင်းကျော်ကိုကျော်စွာငြိမ်းကိုဇော်357ကို‌ဇော်(ဒဂုံ)ကိုချစ်ဦးကိုကျော်ကျော်ဦးစပ်မိစပ်ရာစိုင်းနက္ခတ်ဖိုးသားတူလေးပုဂံသားမောင်ဘကျော်ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာမုန်တိုင်းရာမညဖိုးလပြည့်အလင်းရောင်အညာသားဟိုက်ဝေးအိုင်တီခရီးသည်အိုင်တီမန်းနည်းပညာမှတ်တမ်းမာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများမနောသားမနောဖြူလေးမိုးမြင့်ရှိန်းမိုးထက်မြင့်လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာမလေးရှားရောက်မြန်မာဟင်းလင်းပြင်ကျနော့မှတ်စုစာအုပ်ကနက်သီရီသားလေးညီညီ(လောကမီးအိမ်)ဧရာညီနောင်အီလက်ထရောနစ်ဘုရင့်နောင်ဝိုင်းBurma IT ShareCo2'sNoteSTAMEDIAOgreKP3 FamilyKogee LayWWMMMBloggerHelpdeskMyanmar DownloadMyanmarITMenMy SoftwaresThememagicMonGTCTroj4nEngineer4Myanmar
လေ့လာစရာဆိုဒ်များMyanmardailyအဝါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်Exam CollectionMyanmar telt:Dictionary
ဂျာနယ်နှင်မဂ္ဂဇင်းဆိုဒ်များအင်တာနက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်First Elevenမြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ်မြန်မာတိုင်း(မ်)ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်People OnlineSoccerMyanmarFlashbandBurmeseclassicရွှေအိပ်မက်သနပ်ခါးညကဗျာ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဆိုင်များလေ့လာရန်မြန်မာမြန်မာသတင်းမြန်မာဂျီနီဗာအမြင်သစ်Planet Myanmarရန်ကုန်စီးတီးရန်ကုန်ဂလိုဘယ်Forverspace MRTV-3
နည်းပညာလမ်းညွှန်များMMSOMYSTERY ZILLIONExam CollectionCAD for MynKPZCreativeLayerရိုးရာMyanmarLensmanနဂါးမြန်မာဖိုတိုရှော့မျိုးဇော်လင်းPHPMyanmarZack NotesICT ReadersKnowledgeBridge
ပြည်တွင်းသတင်းလမ်းညွှန်များစွယ်စုံရိုးရာလေးMMDailynewsပုသိမ်မြို့တော်မြန်မာစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းThe VOICEခေတ်လူငယ်All Channelရန်ကုန်မီဒီယာမြန်မာပို့စ်လမ်းသစ်ဂျာနယ်
မန္တလေးစီးပွားရေးလမ်းညွှန်GoldenCityမန္တလေးသတင်းMyanmarExpoနောင်မွန်းTrade ExchangeMyanmarBizPortalInvest MyanmarOMyanmarဈေးကွက်ဂျာနယ်EstatemmeTradeMyanmar
အားကစားနှင့်မိုးလေ၀သရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကမ္ဘောဇအက်ဖ်စီဇေယျာအက်ဖ်စီဒယ်လ်တာယူနိုက်တက်မကွေးရတနာပုံမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ခြင်းလုံးထွန်းလွင်MMWEATHERမိုးလေဝသ၊ဇလဗေဒဦးစီးမှုဌာနတယ်လီဖုန်းဒစ်ရှင်နရီရန်ကုန်ဒစ်ရှင်နရီYellow Map Pageမြန်မာစားတော်ဆက်
29 April (32)
3 June (5)
10 February (3)
17 February (11)
မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ(၁၀၃)အုပ်myanmar computer E book
flash soug သီချင်းများ
Summer holiday (mp3)သင်္ကြန်သီချင်းသစ်များ
ပာင့်အင်း အန်ကယ်။ပာင့်အင်း အန်ကယ်။
အပြာရောင်ချစ်သူ. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.